Kutarisana nezvinhu zvekudzivirira kweimba
Hazvina mubvunzo, chivako chimiro chemhando yeimwe imba. Iwe unogona kupfekedza makamuri sezvaunofadza mukati, kuchinja imba yacho muimba yekugara. Asi kana kunze kuchiita sechinhu chinotyisa, chisina munda wakaoma, chinoyeuchidza nezvechimiro chakafanana chebhokisi mabhokisi, ipapo mutengo haubatsiri kune muumbi wako. Kunyange zvivakwa zvekare zvakavakwa makumi emakore akapfuura, nekubatsirwa kwemarudzi matsva ekutarisa zvinhu zvakashandurwa kuva mavara-matsva emadzimai. Mukuwedzera, kupedzisa kwakadaro kunowedzera zvikuru kuvhara kweimba, iyo inonyanya kukosha panguva dzekuwedzera kuwedzera mumari yegesi nemagetsi.
Mazuva ano anotarisana nezvinhu zveimba
Kutarisana nezvitinha . Nyaya iyi yakasiyana zvikuru nedare rakaoma raishandiswa pakuvaka masvingo kare. Mukuwedzera kune simba, zvakanaka thermal conductivity uye frost resistance, ine zvimwe zvimwe zvinobatsira. Kubwinya kwechitinha chechiso kunotonhora, kwakasvibiswa. Inokwanisa kutevedzera mafungiro anozivikanwa ewaini - Bark beetle , mutana wakare uye vamwe. Iko ruvara rwemavara rwechechi rinotarisa rinoita kuti kugoneka kweimba kusango kungoita zvekare, asiwo machena, apricot, kunyange ikhofi.
Facade plaster . Kunyora nezvekutarisana nezvinhu zvemasimba, hatigone kutadza kutaura nezvepara. Iyi kupfeka isingadzimwi moto, inotora unyoro, inomesa nokukurumidza. Mukuwedzera kumasanganiswa emamiti, acrylic plaster uye silicone ikozvino iko kushandiswa zvikuru. Mitsva mitsva yekugadzirisa inoita kuti zvive nyore kugadzira rusvingo rwakaputika runogara rwakasimba uye rwusingaperi.
Facade yakagadzirwa nematombo . Mhando dzekare dzekushongedza kwemadziro dzichiri mumutambo. Dombo racho harisi kungoshandura imba yako muimba yakasimba, inogona kumire kwemakumi makumi emakore isina kukanganisa uye kwete kuwira kubva kuchando, kupisa kwezuva kana mvura, seplate kana mapurasitiki. Kuonekwa kwebwe rekugadzira kwakaita kuti rudzi urwu rwechigadziro ruve shoma, asi muchimiro icho chinenge chakanga chisina kusiyana nechisikiro chakatangira.
Kuchengetedza zvinyorwa . Iye zvino dzimba dzakawanda dzakafukidzwa nemhando iyi yemasendi. Nokuda kwekugadzirwa kwemasango, mapurasitiki, masimbi, uye huni zvinoshandiswa. Iko kushandiswa kukuru kwemashoko aya ndeyekusimba uye kusununguka kwekuiswa. Kana iwe uchienzanisa mutengo wevose unotarisana nezvinhu zvekunze kwemasvingo, ipapo kushambadzira kwepurasitiki pasina mubvunzo kunonyanya kukosha kune vatengi.
Facade panels uye matani kubva kune ceramic uye mafirimu emapuranga . Zvinhu zvakagadzirwa pamiti yacho hazviperi maererano nekunaka uye simba kune dombo rechisikigo. Kuiswa kweteni yakadaro kunogona kutevedzera kwete chete ibwe rakabvamburwa, asiwo dombo rekona, tile yakaumbwa nemaoko, basalt, dolomite, uye ndarama-lite. Chikamu chepakutanga uye chakasimba chine chisarudzo chakanaka pakuvaka imba.
Akabatanidzwa pamapapiro eimba
Tafura yechemberi yebhedi yerineni
TV pane yepamoto
Misi inopikisana neparuti bhodhi
Interior doors Wenge
Mifananidzo nemashizha emadziro
Kupedza bhomba mukati
Kupedza chikamu chemaoko ne bark beetle
Ndeupi ruvara rwakabatanidzwa nechiedza chakajeka?
Thrombophilia uye pamuviri
Courteney Cox naDavid Schwimmer vakaroorwa?
Kurongedza imba yemhepo - yakanaka uye inobudirira mhinduro
Kuchengetedza peonies mukwata
Kana iwe uchida kuva sexy, usamboshandisa zvakare zvinhu izvi gumi
Zvikoti zvevakadzi zvechando
Ian McKellen akanga asingadi kushanda se "mutungamiri wechato"
Bhuku reroto nderomoto uye nei uchifanira kuona moto muchiroto?
RoE ndiyo inowanzo muvana
Sei imbwa ichirota mukadzi akaroorwa?
Irony of fate: Adele akatenda mushu "anopararira" nekuda kwekusava pakonti uye akarwara
Nechokupfekedza shati refu muvhu?
Zvinokwanisika here kuvhara vakadzi vane pamuviri?
Richard Gere nokukurumidza anoroora musikana wake Alejandra Silva